Ulwaluko lixesha elifunisa inkathalo ngabantwana bethu | News24
Ulwaluko lixesha elifunisa inkathalo ngabantwana bethu
Clement Sukwini- Williams
Lifikile ixesha lolwaluko kungoko kukhutshwa izilumkiso ezingaluncedo ebakhwetheni.
Zidwesha zomzi weNtshona Koloni.
Libuye lafika ixesha lokwenza amadoda; ixesha lolwaluso lwamakhwenkwe neli lixesha elinzima kakhulu kwisizwe siphela ngenxa yelifu elimnyama eligubungele eli siko.
Ukuhlangabezana nemingeni emiyo ke siliSebe lwezoBugcisa neNkcubeko sicebisa ngolu hlobo lulandelayo nakubani na oza kwalusa kwezi holide zehlobo:
Ikhaya liphela malivumelane ngokwaluswa kwenkwenkwe, ungabi yinto kabani nobani umba wokwaluswa komntwana.
Amalungiselelo okuqinisekisa ukuba umntwana ukulungele ngenene ukuya esuthwini makenziwe kwangexesha.
Ikhaya malidibane neqonga lezolwaluso (Initiation Forum) lengingqi yalo ukuva ngezinto ezidingekayo kumalungiselelo okwaluswa komntwana.
Inkwenkwe mayisiwe kwiziko lezonyango (ikliniki) ukuya kuqinisekisa ukuba ikulungele na ukwaluka ngokwasempilweni. Ugqirha okanye igosa lezonyango kufuneka likhuphe isiqinisekiso (medical certificate) sokuba inkwenkwe isempilweni, eso siqinisekiso ke kufuneka sinikwe iqonga lezolwaluso lengingqi yakho nengcibi eza kwalusa inkwenkwe.
Nceda uqaphele: ayimele kwaluswa inkwenkwe ngaphandle kwesiqinisekiso sempilo esikhutshwa ngugqirha okanye ligosa lezonyango elisesikweni.
Cela iqonga lezolwaluko lengingqi yakho ukuba likucebise ngengcibi efanelekileyo nenamava nangenkhankatha elikwanjalo, okanye wazise iqonga elo ngalo ngcibi nekhankatha ocinga ukuyisebenzisa ukuba unabakho. Kufuneka uqinisekise ukuba ingcibi nekhankatha lakho bayathethana ngemiba ethile nangenkqubo yabo yentsebenziswano.
Ukutya komkhwetha makusuke ekhaya ngalo lonke ixesha.
Musa ukumnika imali umkhwetha. Utywala , iziyobisi nezinto ezifana nezo azivumelakanga esuthwini.
Utata okanye indoda yekhaya mayimtyelele rhoqo umkhwetha esuthwini ukuqinisekisa ukuba yonke into ihamba ngendlela kwaye nekhankatha liwenza ngendlela umsebenzi walo.
Zidle ube secaleni konyana wakho ngalo lonke ixesha. sukumyekela kubantu abangaziwayo unyana wakho. Umkhwetha makakhutshwe kuphela akuphila, hayi engekaphili!
Ngeengcebiso ezithe vetshe namalunga neqonga lezolwaluso lengingqi yakho qhagamshelana nabaphathi benkqubo yolwaluso yeSebe:
uMnu C Williams (Sukwini) kule namba: 021 4839717, i-imeyile Clement.Wiliams@westerncape.gov.za okanye uMnu T Ntshona (Nkomo) kule namba 021 4839714, i-imeyile Thandwa.Ntshona@westerncape.gov.za
Nazi iinkcukacha zamaqonga ezolwaluko ngokwahluka kweengingqi.
EDelft fowunela uNkosi Vulithuba Toto Nongwe kwinombolo engu 0735323804.
EDriftsands qhagamshelana no Mnu Situlo Hobe kwinombolo eng 0768542397.
EJoe Gqabi (Phillipi) fumana uNkosi Nicholas Tiya kwinombolo engu 0720360522.
EHazeldene thetha noMnu Sikelela Zokufa kwa 0737726574.
EKhayelitsha fumana uNkosi Thembelani Mtotywa kwinombolo engu 0829306465.
Kwa Langa dibanan no Mnu C Katangana kwinombolo eng 0722326234.
ELwandle kukho umnu Mnu Fumbata Sidwell Majikijela kwinombolo engu 0838814485. EMfuleni krweca uMnu Mgwedli kwinombolo engu 0784043351.
ENyanga Junction thetha no Mnu Siyavuya Qumba kwa 0787981944.
Iinombolo zamaxa kaxakeka zezi:
Umlilo nentlekele yendalo107 kumnxeba wasendlwini, 112 Kwiselula